Sadexdii nin ee lagu dilay Hawlgalkii Paris - Wargane News
Home Somali News Sadexdii nin ee lagu dilay Hawlgalkii Paris
Booliiska Faransiis ayaa Jimcihii gelinkii danbe dilay raggii fuliyey weerarkii lagu dilay 12 qof Arbacadii magaalada Paris iyo waliba nin Sadexaad oo kamid ahaa kooxdaasi oo JImcihii weerar ku qaaday xarun Yuhuuda Paris ka adeegtaan.
Booliiska Faransiiska oo labadii maalmood ee lasoo dhaafayey baadi goobayey labo nin oo walaalo ah, Sharif iyo Siciid Kouachi oo ahaa ragii Arbacadii weeraray xaruntii Jornaalka Charlie Hebdo, weerarkaasi oo lagu dilay 10 qof oo ka shaqeenayey Wargeyskaasi iyo labo Askari oo booliis ah oo uu mid yahay Askari muslim ah.
Labadan nin ayaa subaxnimadii Jimcaha lagu hareereeyey magaalada Dammartin-en-Goële, oo waqooyiga ka xigta magaalada Paris.
Maalinimadii Khamiistii ayaa nin sadexaad oo kooxdan asxaab yihiin koonfurta Paris ku dilay haweenay Askariyad ah isagoo dhaawacay nin kale, weerarkaasi oo markii hore aan la ogeyn inuu la xariiro kooxdii geysatay weerarkii Arbacadii.
Booliiska ayaa khamiistii si gaar ah asna u baadi goobayey ninkan sadexaad ee dilka geystay.
Ninkan sadexaad ayaa lagu magacaabay Amédy Coulibaly.
Dhinaca kale Booliiska oo ku raad jooga labadii nin ee walaalaha ahaa ayaa markii danbe ku guuleystay subaxnimadii Jimcaha inay ku hareereeyaan goob madbacad ah oo ku taal magaalada Dammartin-en-Goële oo 40km u jirta magaalada Paris.
Xili ay Booliiska ku mashquulsan yihiin qabashada labadaasi nin ayaa saaxiibkood Amédy Coulibaly uu weerar kale ku qaaday xarun Yuhuuda ka adeegtaan oo ku taal magaalada Paris halkaasi oo uu ku qafaashay dad gaaraya 10 qof.
Ninkan ayaa ku hanjabay hadii Booliiska ay dilaan labada nin ee saaxiibadiis ah ee lagu hareeraysnaa inuu isaguna dili doono dadku qafaashay.
Booliiska ayaa markii danbe ku khasbanaaday inay labada goobood ee afduubka ka dhacay xoog ku galaan iyadoo iska horimaad ka lagu dilay Labada nin ee walaalaha ah uusan wax khasaaro ah ka dhalan marka laga reebo dhaawac soo gaaray labo askari, waxaana halkaasi lagu dilay Sharif iyo Siciid.
10 daqiiqo kadib ayey ciidamada kale gudaha u galeen xarunta Ganacsiga Yuhuuda ee uu dadka ku afduubtay Amédy Coulibaly, hawlgalkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhintay Amédy Coulibaly iyo waliba 4 qof oo kamid ah dadkii afduubka ku heystay oo rasaasta la isweydaarsanayey ku dhintay.
Xeer illaaliyaha France ayaa sheegay inay hada baadi goobayaan haweenay ay saaxiibo ahaayeen Amédy Coulibaly oo lagu magacaabo Hayat Boumeddiene oo la sheegay inay taleefonka kula xariiraysay ninkan Axmed intuu afduubka ku heystay xarunta ay dadka Yuhuuda ah leeyihiin.
Madaxweynaha Faransiiska Hollande oo shir jaraa’iid qabtay hawlagaladan kadib ayaa sheegay inuu ka xunyahay khasaaraha ka dhashay weeraradii soo socday Arbacadii illaa Jimchii balse wuxuu sheegay inay dowlada France ku guuleysatay inay soo afjarto dadkii geystay weerarada argagaxisada oo si weyn u sameeyey dalka France.
War ay soo saareen Jaaliyadda Yuhuuda ee Paris ayaa lagu sheegay in maanta oo Sabti ah aan la qaban doonin xafladaha ay Yuhuuda todobaad walba isugu yimaadaan, taasi oo ka timid cabsida ay ka qabaan weeraro horleh kadib weerarkii Jimcihii dadka lagu qafaashay. Magaalada Paris ayey degen yihiin Jaaliyadda ugu weyn ee Yuhuuda ku dhaqan Yurub.
Waxaa iyaguna jiray weeraro kala duwan oo lala beegsaday qaar kamid ah masaajidada ku yaal dalka France tan iyo intuu dhacay weerarkii Arbacadii, walow la sheegay weeraradaasi oo ka dhacay dhowr magaalo oo kala duwan in aysan cidna wax ku noqon.